Nvidia Aerial: Kit Yekusimudzira yeKuvaka Yakasimudzwa uye GPU-Inokurumidza Virtual 5G Wireless Networks | Linux Vakapindwa muropa
Nvidia Aerial: Kit Yekuvandudza Yekuvaka GPU-Inokurumidza Yakasimudzwa Virtual 5G Wireless Networks
5G inovimbisa kuve kumwe kufambira mberi kukuru munhare mbozha nhasi. Cheros ona mukana wekuvandudza mashandiro kuburikidza neakagadziridzwa chimiro chemuviri, kusanganisira kushandiswa kwemamirimita emamirimita, kunyangwe iri pfupi pfupi Latency inogona kuderedzwa nechinhu chegumi, bandwidth pakanyanya kuwanda nezviuru, huwandu hwevatengi pamakiromita kiromita yakawedzerwa nemamirioni akati wandei.
Vamwe vari kutarisa kudivi rekuona kwenetiweki. Saizvozvo, imwe yemabhenefiti e5G ndeyekuti chikamu chimwe nechimwe chichagadziriswa, iyo inoteedzera yazvino kuitika mune dhata nzvimbo: pamusoro peiyo chaiyo kanyanga, zvese zvikamu zve5G network zvinogona kugoverwa mumamashini chaiwo, anotambirwa chero kupi pasi.
Somuenzaniso, mukombuta centre, zvese zvinogona kuvezwa kunze kwekubatana kwenetiweki zvekunze: chikamu chega chega chekushandisa (dhatabhesi, dura rekushandisa, nezvimwewo), asi zvakare zvikamu zveinetiweki (kuenzanisa mutoro, nzira, nezvimwewo), inowanzo kutaurwa neshoko reSNN (rinotsanangurwa netiweki nesoftware).
Dzese idzi shanduko hadzisi dzekungodzungaira mumazano kana prototypes kana zvisiri izvo izvo zvakatounzwa kuchokwadi uye ndizvo zvazvirie Nvidia CEO Jensen Huang achangobva kuvhurwa dzakateedzana nhau ku Mobile World Congress muLos Angeles, kuzivisa nyowani supercomputing chikuva, software yekuvandudza kit uye mubatanidzwa mutsva neMicrosoft, Red Hat uye Ericsson, zvese zvine chinangwa chekuratidzira maNvidia ekugadzirisa maikisheni (GPUs) uye kuti aya anogona sei kutyaira matsva 5G masevhisi uye masystem.
Aerial ikisimusi kit software iyo inobvumidza vanopa mafoni tanga na zvinhu zviviri zvakakosha zve Nvidia's 5G chipiro- A 5G chiratidzo chinogadzira injini ine dhata mune iyo CPU ndangariro yekukwirisa mashandiro uye Mellanox network interface inobatanidza zvakananga iyo memory yeGPU netiweki interface.
UVNF inotarisa pakuona kwema network mabasandiko kuti, kugadzira yakagadziriswa yekuisa-kuburitsa mashandiro uye packet manejimendi kuburikidza yakanangana interface kune network kadhi (GPUDirect).
cuBB yakanyanya kutarisana neicho chimiro chemuvirinekudaro kugadzirisa chiratidzo (uko iyo GPU yanga iri yakanaka kwenguva yakareba), kunyanya necuPHY yeiyo 5G yemuviri safu yekumisikidza.
Kune atove nemambure makadhi anoenderana neGPUDirect tekinoroji, semuenzaniso, iyo Mellanox CX-5. Kune maGPU, mhuri yese yeNVIDIA inogona kushandiswa kubva kuJetson Nano kuenda kumaseva eEGX.
Iko kusanganiswa kweAerial uye EGX kunoita kuti gpu yekumhanyisa ibvire mukati mekutenderera kwenharembozha yakavakwa paKubernetes. Iyo EGX stack ine akashongedzerwa neNvidia mutyairi uye kambani plugins yeKubernetes uye nguva yemidziyo. Chekupedzisira, iyo stack ine gpu yekutarisa maturusi.
Chipo chaNvidia cheMellanox chakagamuchirwa pakutanga kwegore rino, saka iniVashandisi vekutanga vemhinduro nyowani ndiWalmart, BMW, Dzivirira & Gamble, Samsung Eletronics, NTT East, Ericsson, Microsoft uye Red Hat. Maguta eUS eSan Francisco neLas Vegas akawedzerwawo.
NVIDIA CEO Jensen Huang akati:
Mhinduro yacho yakakosha sezvo isu tichipinda munguva iyo mabhiriyoni eIoT zvishandiso zviri online zvisingamire zvinoshandisa 5G kubatanidza uye hazvizoshande pasina njere dzekunyepedzera.
Maererano naHuang, izvi zvinoda kirasi nyowani yemhando yepamusoro makomputa, ine dziviriro yakasimba uye nyore kure kutonga. Yakarondedzerwa zvisina kunangana NVIDIA EGX Edge Supercomputing. Iko kushanda kwemhinduro kunofanirwa kunge kuri pamusoro peanhasi makomputa ako ega uye nemasevhisi masevhisi.
Nvidia anoda kuve chikamu cheiyo ramangwana re5G nekuti iwe unotenda kubatana chinhu chakakosha chemangwana remakomputa enzvimbo. Iyo Hardware dhizaina yakamborekodha chiratidzo chenguva yemberi umo mamiriro emakomputa anochinja kuita yemhando yakasanganiswa ine Hardware padhuze nepane iyo data, yakabatana pasirese pasirese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Nvidia Aerial: Kit Yekuvandudza Yekuvaka GPU-Inokurumidza Yakasimudzwa Virtual 5G Wireless Networks
AMD, Embark Studios uye Adidas vanobatana neBlender Foundation